आलोकको अन्तिम चलचित्र ‘अझै पनि’को नयाँ गीत सार्वजनिक (भिडियो) « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
आलोकको अन्तिम चलचित्र ‘अझै पनि’को नयाँ गीत सार्वजनिक (भिडियो)
Published On : November 8, 2014
आफ्नै निवासमा विहीबार साँझ मृत अवस्थामा भेटिएका चर्चित चलचित्र तथा म्यूजिक भिडियो निर्देशक आलोक नेम्वाङ अहिले हाम्रो साथमा नभएपनि उनका हरेक चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोहरुले उनको सम्झना दिलाइरहेका छन् । उनले हाम्रो पासमा एउटा नयाँ चलचित्र छोडेर गएका छन्, जुन रिलिजको क्रममा छ ।
उनले निर्देशन गरेको अन्तिम चलचित्र ‘अझै पनि’ फागुन १५ मा रिलिजको तयारीमा छ । सोहि चलचित्रको एक गीत सार्वजनिक भएको छ । स्व. निर्देशक आलोक नेम्वाङ्लाई यो चलचित्रमा समावेश पाँच गीत मध्ये ‘के कुरा कस्ले तिमिलाई सुनायो’ बोलको यस गीत सबैभन्दा प्यारो थियो । संयोगवश मिडियामा सार्वजनिक भएकै दिन बिहिवार आलोकको निधन भएको थियो ।
गीत सुन्दा निर्देशक आलोकका सम्झना ताजा बन्छन् । गीतलाई विजय सिवाकोटीले लेखेका हुन् भने सचिन सिंहको संगीत र राजु तामाङको स्वर रहेको छ । चलचित्रमा सुदर्शन थापा, पूजा शर्मा, सुरक्षा पन्त, पुष्प खड्का, विशाल ढुंगाना, रामशरण पाठक, विपना धिमाल लगायतका कलाकारहरुले चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् ।
सुदर्शन थापा प्रडक्शन र पुनम इन्टरटेन्मेण्टको ब्यानरमा बनेको ‘अझै पनि’लाई पुनम गौतम र सुदर्शन थापाले संयुक्त निर्माण गरेका हुन् ।
चलचित्र ‘अझै पनि’ परिवारले दिएको स्व. निर्देशकलाई दिएको श्रद्धाञ्जली